नेपाली चेलीको सत्य यौन कथा, अवश्य पढ्नु होला « Today Khabar
प्रकाशित १ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १६:३३
काठमाडौं,१ जेठ . म नवलपरासीमा बस्छु, मेरो उमेर २७ वर्ष भयो । यो यथार्थ घटनामा आधारित कथा हो ।
१८–२० वर्ष पुगेका किशोरकिशोरीहरुको कौतुहलताको विषय नै हो, केटीसँग सेक्स गर्दा आफू कति धेरै टिक्न सक्छु भनेर ? हस्तमैथुन गर्दा २०–२५ झट्कामै झथ्र्याे । त्यसले चिन्ता बढाएको थियो । तथापी जे हुन्छ हुन्छ, स्पटमै देखिन्छ भन्दै यौन तृप्तिको लागि मेरो मनले केटीको खोज गर्न सुरु गरिसकेंको थिए । स्कुल र कलेज पढ्दा त केटीहरुले लाइन दिन्थी तर आफू अलि अध्यात्म प्रकारको मान्छे र पढ्नमा पनि अरु साथीहरुभन्दा जेहेन्दार भएकोले केटीहरुतिर रुची हुँदाहुँदा पारिवारिक वातावरणले प्रतिष्ठा त जाँदैन् भन्ने डर कहिल्यै केटीहरुसित घुलमिल गर्न मानेन । २५ वर्ष कटिसक्दा सामाजिक सञ्जालमै सेक्सको चाहना दर्शाउँदै आएको थिएँ, यौन कथाहरु लेख्ने र समय समयमा पोष्टहरु गरिराख्थे ।
बालाजुकी सुस्मिता पो रैछ । उनले फेसबुकबाट नम्बर पाएर कल गरेको बताईन् । उनले आफ्नो बारेमा बताइसकेपछि मैले सुस्मिताको ईच्छा सोधें । श्रीमान एक वर्षअघि विदेश गएको र तिब्र यौनसम्पर्कको चाहना पोखिन् । त्यसअघि मैले उसको फोटो नहेरिकन सम्पर्क नगर्ने स्पष्ट भने । उनले फेसबुक मैसेजमै आफ्नो फोटो पठाइन् । पाँच फिट तीन इन्च लामो सल्ल परेको जिउ थियो सुस्मिताको । साडीमा झनै सुहाउँथि । दूध साइज ३४ को थियो होला सायद हेर्दै समाईराखौ जस्तो। हेर्दे टपक्क टिपेर खाउँ खाउँ लाग्ने ।
दुवै जनाले सबै कुरा शेयर गरिसकेपछि कहाँ र कसरी भेट्ने कुरो मिलाएँ । उनले बालाजु नै रोजिन । म दुईदिनको समय लिएर एउटा होटेल बुक गराएँ । उनले एक रातमात्रै बस्ने बताइन् । नवलपरासीबाट बिहानै हिडे काठमाडौमा १० बजे पुग्यो । होटेल बाहिर खाना खाएर हामी होटेलमा फर्कियौं । उनले सम्भोग गर्नुअघि नुहाउने कुरो गरिन् । मैले हुन्छ भन्दा बाथरुमसम्म डोर्याइदिएँ । आफूलाई त कतिखेर चिकौं जस्तो लागिरहेको थियो । मनलाई थामेर बाथरुममा छोडेपछि उनले बाथरुम खुलै राखेर साडी, ब्लाउज र पेटिकोट खोलिन् । ब्रा र पेन्टीमा उनी मस्त देखिएकी थिइन् ।
उनको सम्मम परेको जिउ, ठूलो दूधको पोका र योनी बाहिर पेन्टी माथिबाट नै उठेको भाग हेर्दै मेरो पाँच ईन्चको लिंग त पाईन्ट च्यात्दै बाहिर निस्किन खोज्यो । बाथरुममा छिर्न मन लाग्यो । आफूलाई रोकें । जिउमा पानी हाल्दै गर्दा दूधको निप्पल र तलको भुत्ला हेर्दा झनै रोमाञ्चित हुन थालें म । मनलाई थाम्नै सकिएन । अचानक बाथरुममा छिरेर सुस्मितालाई पछाडीबाट ब्रा बाहिरैबाट दुवै हातले दूध बेस्सरी माड्न थालें । सुस्मिता एैया एैया सुस्केर हान्दै रोमाञ्चित हुन थालिन् ।
सुस्मिताले कस्सेर अँगालोमा बाँधिन मलाई। मैले उसको हिप समातेर दुर्इ जिउ एक भएझैं टाँस्यौं । गाला, घाँटी, निधार हुँदै उसको दूधसम्म किस खाँदै गएँ । झट्ट उसले मेरो पेन्टीभित्र हात छिराएर मेरो रन्किएको लिंगलाई चलाउन थालिन् । हातमा अटाउनै नसक्ने मेरो लिंगको साइज हेरेर मोरीले सधैंको लागिदिनु भनिन् ।
मैलो झट्टै आफ्नो पेन्ट खोलेर फाले । उनको ब्रा पनि खोल्यौं । स्तन हेर्दै चौबिस घण्टा चुसिरहु र दलिरहुँ लाग्यो । भित्तामा टाँसेर एउटा खुट्टा उचाल्दै मेरो रन्किएको सानो भाई उनलाई समात्न लगाएँ । मेरो लिंगलाई चलाउँदै उनले दुई तिघ्राको बिचमा जोडिन् । प्वालमा मिल्ने बित्तिकै मैले बेस्सरी हाने । उनी जोडले चिच्याउन थालिन् । हेर्दा आधी मात्रै गएको रहेछ । श्रीमानको लाडो तीन इन्च जतिको मात्रै रहेछ र एकाध पटक चलाउँदै वा हान्दैमा स्खलित हुने सुस्मिताले सुनाईन । मैले धेरै घिउ दलेर मेरो शेरलाई तयार पारेको भन्दै सुस्मितालाई धक्का दिन थाले । उन आ आअ ऐया ऐया भन्दै बाथरुमभित्रै चिच्याउन थालिन् ।
मेरो स्पीड झनै बढ्यो । मेरो लिंगले उनको यौनी हुँदै पर्खाल नै फुटाउने गरी धक्का दिन थालें । उसले जोड जोडले मेरो शरीरलाई कस्न थालि । आधीभन्दा अली मात्रै बढी छिरेको देखेर मैले सुस्मिताको यौनी छेउमा औंला लगेर खुकुलो पार्ने प्रयास गरें । मोरे लिंग अली मोटो रहेकोले छिराउने गाहे भयो । र पनि मैले दम लगाउन छोडिन । औंलाले यौनी च्यात्दै हानेको त मोटो लिंग छिर्ने बित्तिकै उनले बेस्सरी ऐय्या….. भन्दै बोल्नै छोडिन् ।
करिब १० मिनेट मजि मच्चिएपछि उनले शान्तको सास फेरिन त्यस पछि दुई चार जड्का जोडले लगा त्यसपछि मेरो सानो भाईले पनि बमिट गरिहाल्यो म शिथिल भए । रातभरी उनलाई ५ पटक सेक्स सन्तुष्टि पारे उनि मनि खुब खुशि हुदै मलाई धन्यवाद दिईन । दुवैजना एकअर्काको अंगालोमा बाँधीएर सुतेको थियो उज्यालो भएको पत्तै भएन । फेरि छुटिने बेलामा एक पटक गरौ न उनले भनिन् र म पनि के कम् हुन्छ भन्दै शुरु गरियो रशलिला । त्यसपछि हामी पुनः अर्को पटक यस्तैका लागि भेट्ने वाचा गर्दै आ–आफ्नो बाटो लागियो । एजेन्सीको सहयोगबाट